Madheshvani : The voice of Madhesh - अर्को निर्वाचनसम्म मधेशमा वैकल्पिक शक्ति निश्चित आउँछ : देवेन्द्र मिश्र (अन्तर्वार्ता)
संस्थापक नेता, नेपाल सद्भावना पार्टी
० स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहको १७ औं स्मृति दिवस मनाइएको छ । उहाँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
— गजेन्द्रबाबुले विजारोपण गर्नुभएको विचार आजभोलि हराउँदै गएको पाउँछौं । गजेन्द्रबाबुले भाषा, संस्कृति, आरक्षण, संघीयता लगायतका विषयहरु लिएर अगाडि बढ्नुभयो र त्यसकै आधारमा सबैले आ–आफ्नो पार्टीमा यी विषयहरु समेटे । तर आज उहाँका विचारहरु हराउँदै गएका छन् । त्यसमा दृढता र निश्चितता नभएको देख्दा हामीलाई दुख लाग्छ । गजेन्द्रबाबुको स्मृति दिवसमा उहाँलाई मधेशवादी संस्थापक नेताकै रुपमा सम्झन्छौं । उहाँको समयभन्दा पहिले पनि मधेशका कुराहरु त उठेका थिए तर २०४० सालपछि उहाँले जसरी मधेशको विषयलाई अगाडि ल्याउनुभयो त्यो अतुलनीय छ ।
० स्वः गजेन्द्र नारायण सिंहले उठाउनुभएका मुद्दाहरु आज कुन अवस्थामा छन् ?
— उहाँले लिनुभएको विचारधारामा अहिलेका नेताहरु आफैं कन्फ्यूज्ड छन् । सत्ताको वरिपरी घुम्ने मात्र बढी मधेशी नेता भए तर साँच्चिकै मधेशका लागि काम गर्नेहरु र गजेन्द्रनारायणको विचारलाई लिएर अगाडि बढ्नेहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ । विचार त अहिले पनि छ तर त्यो विचारमा हुनुपर्ने मजबुति अहिले छैन ।
० उहाँका सिद्दान्त र दर्शनलाई पुनःजागरण गर्न तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
— त्यसका लागि विचारको क्रान्तिको आवश्यक्ता छ । आज सत्ता र कुर्सीको लोभमा मधेशवादलाई लिप्त बनाएर अगाडि बढ्ने काम भईरहेको छ त्यसलाई रोख्नुपर्छ । अहिलेका मधेशवादी दलहरुले आफ्नो माग र धारणालाई स्पष्ट रुपमा मधेशकै जनतालाई बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन । कुन विषयलाई बढी जोड दिइरहेका छन् भन्ने विषय नै प्रष्ट छैन । विगतमा हामीले भाषा, आरक्षणका विषयलाई मजबुतीका साथ अगाडि ल्याएका थियौं र ती कामहरु गराएरै छोड्यौं तर आज यही नै मधेशी दलको माग हो भन्ने कुनै विषय नै प्रष्ट देखिएको छैन । विकासका कामहरु त क्रमशः चल्छ तर जहाँ अधिकारका कुराहरु आउँछ त्यता ध्यान नदिएर बस्न मिल्दैन । आज विकासका नाममा जितेर गएका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको नाम आइरहेको छ, त्यो त लज्जाको विषय भयो । भाषा, नागरिकता, संस्कृति, संघीयतालाई कानुनी स्वरुप दिने मुद्दाहरु हराउँदै गएका छन् त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई केलाउँदै अगाडि बढ्ने व्यक्ति कता गए ? राज्यले यी मुद्दाहरुलाई स्वीकार ग¥यो तर त्यसलार्ई निष्कर्षमा नपु¥याई आधा बनाएर राखेको छ । त्यसका लागि लड्ने व्यक्ति को ? यस्ता विषयलाई हामीले जनतालाई, शिक्षित जमातलाई बुझाउन सक्यौं भने एउटा जमात तयार हुन्छ त्यसले विचारको क्रान्ति गर्छ र गजेन्द्रनारायण सिंहले थाल्नुभएको विचारलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छ ।
० विगतमा सद्भावना नामधारी आधा दर्जन जति राजनीतिक दल थिए । तिनीहरु कतिपय अहिले राजपामा विलिन भइसकेका छन् । आफूलाई उत्तराधिकारी भनेर दाबी गर्नेहरुको अहिलेको अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
— आजको राजनीति पैसाको लागि गरिने भईसकेको छ । जुन समयमा हामीले राजनीति सुरु गरेका थियौं त्यतिबेला विचारको राजनीति हुन्थ्यो । पुराना नेताहरु जसले विचारको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन्थे आजका दिनमा ति सबै घर बसिसके । अहिले नयाँ पुस्तामा राजनीतिमा प्रवेश गर्नेले विचारभन्दा पनि पैसा, गाडी, सहरमा घर आदि देख्न थाले र कुर्सी र सत्ताका लागि राजनीतिक गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुँदै गयो । विचार र चिन्तन भएका र धैर्य गर्न सक्ने हाम्रा समयमा नेताहरुले अहिलेको राजनीतिमा बग्न सकेन र पछाडि हटे । उनीहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र गजेन्द्र बाबुको सपना साकार हुन सक्छ ।
० नेपाल सद्भावना पार्टीलाई पुनः गठन गर्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?
— राजनीतिमा नामको खासै महत्व हुँदैन, विचारको महत्व रहन्छ । सद्भावना पार्टी होस् वा अन्य कुनै नामले पनि गोलबद्ध त भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेशका जस्ता समस्याहरु छन् विगतमा थिएन । अहिलेसम्म पनि केही घटेको छैन झन् बढ्दै गइरहेको छ त्यसलाई समाधानको दिशा दिन अत्यन्तै जरूरी भईसकेको छ । मधेशी दलहरुप्रति मधेशी जनताकै विश्वास घट्दै गईरहेको छ । अहिलेका दलभित्र पनि केही व्यक्तिहरु छन् जसले मधेशको यथार्थ समस्यालाई बुझेका छन् तर त्यसभित्र ठूलो जमात छ जुन सत्ता र पैसाको लागि मात्र राजनीति गरिरहेका छन् । विचारको राजनीति गर्ने सबैलाई मिलाएर मधेशमा राजनीतिक दल खोल्नु अहिलेको आवश्यकक्ता देख्छु । त्यतातिर कुराहरु भइरहेको मैले पनि महसुस गरेको छु । मसँग पनि पूर्वमेची देखि महाकालीसम्मका साथीहरुले कुरा गरिरहेका छन् । समग्र मधेश एक प्रदेशको विचार पनि धुमिल भइसकेको छ । गजेन्द्रबाबुले सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकालीका मधेशीहरुलाई लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो । सबैले संघर्ष गरेका हुन् तर आज केही क्षेत्रका व्यक्तिहरुले मात्र उपलब्धी पाएका छन् । यही कारण केही साथीहरुको मन चिसो भएको छ । उनीहरुलाई जगाएर उनीहरुको विचारमा ताजगी ल्याएर अगाडि बढ्न सकियो भने त्यतिकै बलियो र सशक्त भएर आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्न सकिन्छ ।
० मधेशमा वैकल्पिक शक्तिका लागि गहकार्य सुरु भइसकेको हो ?
— यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । जब तपाईले आफ्ना विचारहरुलाई सशक्त रुपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न त्यहाँ भित्र सानो वा ठूलो रुपमा अर्को व्यक्तिले प्रयास गरिहाल्छ । कुनै पनि अवस्थामा समयलाई रोक्न सकिदैंन । सबैलाई मिलाएर लैजान केही समय लाग्छ र त्यही समयको प्रतिक्षा छ सबै साथीहरु । अर्को निर्वाचनसम्म मधेशमा अर्को वैकल्पिक शक्ति निश्चित आउँछ ।
० वर्तमान समयमा अस्तित्वमा रहेका राजपा र फोरमले मधेशलाई न्याय दिन सक्ला वा संविधान संशोधन गराउने क्षमता देख्नुहुन्छ ?
— विचारमा ढुलमुल भईरहेको कारणले गर्दा फोरमले मधेश मात्र होइन देशको विषयमा सोचेको जस्तो गर्दैछ । यसरी त विचारमै फरकपना आयो । अर्कोतिर ६ दलको गठबन्धन भएर राजपा पार्टी निर्माण भएको छ । ६ दलको खिचातानी आजसम्म पनि चलिरहेकै छ । तागत त छ तर त्यो तागत विभाजित भएको छ । विभाजित अवस्थामा मधेशवादका कुराहरुलाई लिएर अगाडि बढ्दा त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । शासकलाई कसरी यिनीहरुलाई फोर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्र सोच रहेको हुन्छ । त्यसबाट चेत खाएर मधेशका प्रमुख दुई दलले नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो देखिएको छैन ।
० तपाई राजपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले छाड्नुभयो ?
— म अहिले पनि छु, तर निस्क्रिय । ६ वटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरु यति धेरै भए कि मैले बोलेर विचार राखेर सुन्ने मान्छे नै कोही छैन जस्ता लाग्यो । ६ जना अध्यक्षको संयुक्त निर्णयले पार्टी राम्ररी नै सञ्चालन भएको होला भन्ने आशामा छु । महाधिवेशनबाट राजपाभित्र रहेको ६ वटा अध्यक्षको गठबन्धलाई हटाएर एकल नेतृत्वको पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ । विधान परिवर्तन गरेर एउटा व्यक्तिको अध्यक्षतामा पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।